Ọnụ ahịa anyị dabere na arịrịọ gị zuru ezu n'ihi ya, dị ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, mma nkwakọ ngwaahịa, ọkwa ihe, ụdị ule na oge ụzọ wdg. Anyị ga-ezitere gị ndepụta ọnụahịa emelitere mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị.
Ee, anyị nwere MOQ dị iche iche maka ihe dị iche iche.
MOQ 300pcs maka ihe na-abụghị ígwè.
MOQ 500pcs maka metal ihe.
MOQ 1x40HQ nwere ihe 5 dị iche iche.
ya mere, anyị na-akwado ka ị kpọtụrụ anyị maka nkọwa zuru ezu.Ọ bụrụ na ị na-achọ ire ere n'ọnụọgụ dị obere, biko nweere onwe gị jikọọ maka mkparịta ụka ọzọ.Obi dị anyị ụtọ ịkwado azụmahịa gị.
N'ihi na samples, ụzọ oge bụ banyere 2-7 ụbọchị.
Maka mmepụta oke, oge ụzọ bụ 30-45 ụbọchị mgbe ị nwetasịrị nkwụnye ego nkwụnye ego.Oge ụzọ na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nkwenye ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị.Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na njedebe gị, biko jiri ire gị gafee ihe ịchọrọ.N'ọnọdụ niile, anyị ga-agbalị ịnabata mkpa gị.Ọtụtụ mgbe, anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Kedu ihe kacha ibu ibu?
Ọ dabere na ụdị mgbidi na ngwaahịa dị iche iche.
N'ihi na shelves screwed na mgbidi, kacha loading bụ 10kgs na drywalls na 15kgs + n'elu sink / osisi mgbidi.
Maka oche ma ọ bụ oche, ihe kachasị elu bụ 100kgs.
Maka akpa akwụkwọ / shelf dị n'ala, ihe kachasị elu bụ 70kgs.
enwere ike iji ngwaahịa gị n'ime ụlọ ịsa ahụ?
Ee, ihe mkpuchi ngwaahịa anyị bụ nke enwetara mmiri yana mkpuchi igwe gafere ule ịgbasa nnu.
Nke ahụ na-eme ngwaahịa anyị workable maka ime ụlọ ịsa ahụ.